HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 28-NOV-2020
Saturday November 28, 2020 - 11:20:42 in Wararka by Mogadishu Times
Khasaaraha Ka Dhashay Qaraxii ka Dhacay M/ Muqdisho Oo La Shaaciyay
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khas aaraha ka dhashay qarax xoogan oo Is-miidaa min ahaa oo xalay ka dhacay Maqaayad ku taa lla wadada aada dhinaca Garoonka diyaarad aha Magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde.
Qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa gudaha u galay Maqaayada lagu magacaabo Ja laato Devino oo
ku taalla kasoo horjeeda how lka Sahal, xili dad u badan dhalinyaro ay fadhiy een markii uu qaraxaas dhacaayay, kaasi oo jug tiisa laga maqlay inta badan degmooyinka Gobolka Banaadir.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaas oo soo gaaray dhal inyaro farabadan oo Maqaayada fadhiyay, wax aana ku jira Wiil dhalinyaro ah oo gelinkii dambe ee shalay soo gaaray Muqdisho, isagoo ka yi mid dalka Itoobiya.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Md.Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo war ba ahinta kula hadlay goobta uu qaraxu ka dha cay ayaa waxaa uu sheegay in qaraxa ay ku dhi nteen 7 ruux oo dhalinyaro ah, halka dad dhow 10 qof kalena ay ku dhaawacmeen.
Gaadiidka gurmadka deg dega ah ayaa goob ta looga daad-gureyay dadkii ku dhaawacmay qaraxii xalay ka dhacay maqaayada Devino oo ah goob lagu iibiyo Jalaatada iyo waxyaabo kale oo macmacaan ah, kuwaasi oo la geeyay Xaru mo Caafimaad oo ku yaalla Muqdisho, si xaal adooda Caafimaad loogu dabiibo.
D/F/Soomaaliya ayaa si kulul u Cambaarey say qaraxaas Is-miidaaminta ahaa, waxaana Qo raal kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta lagu sheegay in Dowladda ay ka xuntay wixii dha cay, iyagoona tacsi u diray qoyska dadkii goob ta ku naf-waayay.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahan Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxa med Finish ayaa si kulul uga hadlay Qaraxii Is-miidaaminta ahaa
ee xalay ka dhacay Maqa ayada Gelato Divino ee degmada Wadajir.
Guddoomiye Cumar Finish ayaa tacsi u dir ay dhammaan qoysaskii, Qaraabadii iyo Asxa abtii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday Qar axii xalay, wuxuuna falkaas ku tilmaamay inuu ahaa mid argagax leh oo lagu laayay shacab So omaaliya.
Duqa Muqdisho ayaa shacabka Soomaaliye ed ugu baaqay in si wadajir ah meel looga soo wada jeysto la-dagaalanka Al-shabaab, si shac abka Gobolka ay ugu noolaadaan nolal ku dhis an Xasilooni iyo horumar, waa sida uu hadalka u dhigay.
"Waxaan Murugada iyo Tacsida la wadaaga yaa Dhamaan qoysaskii, Qaraabadii iyo As xaabtii ay ka baxeen Walaalihii Soomaaliyeed ee ku shahiiday dhacdadii waxuushnimada ahe yd ee ka dhacday Maqaaxida Gelato Divino. Si umadeena ay ugu noolaadaan nolal ku dhisan Xasilooni iyo horumar waxaa dhamaanteena wa ajib nagu ah inaan u midowno la dagaalanka wa xa loogu yeero Argagixisada oo Had iyo Jeerba caadeestay daadinta dhiiga dad Muslim ah oo aan waxba galabsan” ayuu yiri Cumar Finish.
Al-shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada qaraxii
xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho, iyago ona sheegay inay bartilmaameedsadeen Saraa kii isugu jiray Sirdoon iyo xubno kale oo ka tir san dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku su gnaa maqaaxida uu qaraxu ka dhacay.
RW Rooble Oo Ka Hadlay Qarax Ka Dhacay Muqdisho
R/Wasaaraha Dowladda Federaalka Soo maaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka had lay Qarax Caawa ka dhacay Magaalada Muqdi sho oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah gaystay.
Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ah, waxaana fuliyay Qof isku soo xiray waxyaabaah qar xa, kaasi oo isku qarxiyay Maqaayad lagu Magaca abo Gelato Div ino oo ahayd mid aad u mashquul badan goor ta u qar axu dhacayay.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u tacsiyeeyay dadkii ku dhintay Qaraxaasi ismiidaaminta ah, waxaana uu Alle uga baryay in uu si deg deg ah u bogsiiyo inta ku dhaaw acan tay.
"Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa ehel ada dadkii ku dhintay qaraxii argagixisadu caa wa la beegsadeen maqaaxi ay dad shacab ahi ku sugnaayeen magaalada Muqdisho. Eebbe ha u naxariisto intii dhimatay, dhaawacyadana Allaha bogsiiyo. Waa in aan u midownaa la dag aallanka argagixisada si aan dalkeenna iyo dad keenna uga badbaadinno” ayuu RW Rooble
Musharaxiinta xilka Madaxweynaha oo si kulul u cambaareeyay Qaraxa maqaayadda Gelato Divino
Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Sooma aliya ayaa si kulul u cambaareeyay Qaraxii maq aayadda Gelato Divino oo lagu dilay dhalinyaro Soomaaliyeed .
Qaar ka mid ah Musharaxiinta xilka Madax weynaha Soomaaliya ayaa dowladda Soomaali ya ku dhaliilay in ay ku fashilantay sugitaanka Amniga caasimada, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay mi doobaan.
Gudoomiyaha golaha Musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay laamaha Am maanka dowladda Soomaaliya in ay laba jiraan howlahooda sugitaanka Ammaanka.
"Waxaan cambaareynayaa falkii foosha xu maa ee argagixisadu ku weerareen maqaayad da Gelato Divino ee magaalada Muqdisho, halk aas oo ay ku geeriyoodeen dhalinyaro mustaq balka dalkeenna muhiim u ahaa. Waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaska Marxuumiinta naga baxay Allaha u naxariistee, anigoo dhaawacyadana Alle uga rajeynayo caafimaad degdeg ah., Ugu dambeyntii waxaan ku boorinaynaa Hay’adaha Amniga ee Dowladda inay labalaabaan dada lkooda ku aadan sugidda amniga, anigoo ugu baaqaya ineysan ka weecan, kana mashquulin howshii loo igmaday ee sugidda amniga, si gaar ah xilliga kala guurka” ayuu ku yiri Shariif Qoraal uu soo saaray.
Md.Daahir Maxamuud Geelle hoggaamiyaha xisbiga dan Qaran ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado in dhalinyarada la dilo, wax aana uu sidoo kale tacsi u diray ehelada dadkii ay waxyeelado soo gaartay."Waxaan canbaaray nayaa falka foosha xun ee lugu xasuuqay dhallinyarada aan waxba galab san, luguna fasahaadiyay maalka muwaadiniin ta Soomaaliyeed, Ehelada iyo qaraabada ay ka bexeen dadkii ku geeriyooday qaraxa ka dhacay wadada airport-ka Muqdisho Maqaayadda Ge lato Divin ayaan si gaar ah tacsi ugu diraynaa lana wadaagayaa murugada, Dhallinyarada aq oonyahanka ah ee lugu laayay falkaal waxay ah aayeen labeentii bulshada, wuxuuna ka dhigan tahay isku day bulshada indhaha looga tuurayo” ayuu yiri Daahir Geelle.
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxma an Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay dhalinyaro lahaa Mus taqbal wanaagsan ayna tahay wax laga xuma ado.
"Waxaan si xoogan u canbaaraynayaa wee rarkii argagexiso ee lagu qaaday maqaayada Gelato Divino. Waxaa caawa goobtaas ku go’ay dhalinyaro uu hiigsi nolol iyo mustaqbal yididiilo leh ka hor muuqdo, kuuwaasoo doonayey in ay dalkooda iyo dadkooda dhisaan. Dhamaantood Allaha u naxariisto. Tani waa fariin ay argagexi sadu dirayaan, oo ay leeyihiin goob kasta ayaan beegsan karnaa” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cab dishakuur.
SAWIRRADA:-DHALLIYRADII KU GEERIYOOTAY QARAXII XALAY.
Hanti dhowraha Guud ee Qaranka Maxamed Maxamuud Afgooye ayaa sheegay in Xafiiska Hanti dhowrka uu ballaarinayo howlaha lagu ba arayo xafiisyada dowladda & dowlad goboled yada.
Waxaa uu shee gay in Xafiiska Hanti dhowrka Guud ee Qaranka & kuwa do wlad gobole edyada ay qaadanay aan Shaqaale oo taba bara yo baaris maali yeed oo la xiriira dhi naca musuq maas uqa. Waxaa uu sheegay inay waajib tahay in sa nad walba la helo natiijo baarised lagu kal so onaan karo oo lagu xisaabiyo nidaamka maa liyadda Qaranka.
Ugu dambeyn Hanti dhowraha Guud ee Qar anka Md.Afgooye ayaa sheegay in xoojinayo kor u qaadida isla xisaabtanka dhanka Maaliy adda dalka si loo gaaro nidaam maamul oo do wlad wanaag ku dhisan.
Hadalkaan ayaa Hanti dhowraha guud ee Qaranka waxaa uu ka sheegay Shir sanadeed ka Hanti-dhowrka Qaranka iyo kan D/G/yada oo Magaalada Muqdisho ka furmay.
Midowga Musharixiinta oo ku tilmaamay had alkii Duqa Muqdisho mid colaad hurin ah (Baaq culus)
Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxwey naha ayaa si kulul u cambaareeyay hadalkii ka soo yeeray Guddoomiyaha G/Banaadir ahna Du qa Muqdisho, iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa mid colaad hurin ah, ayna dhab ku qaadanaya an hanjabaada Guddoomiyaha ay tahay farriin ka timid Madaxweyne Farmaajo, toosna ugu socota xubnaha Musharaxiinta.
Sidoo kale Goluhu aya a sheegay inay u ca daa tay in hoggaanka dowl adda uu adeegsana yo tabihii Al-Shabaab ee xalaaleysiga dhiigga shacabka, iyadoo diin la adeegsanayo.
Ujeeddo: canbaarayn hadalkii colaad hurinta ahaa ee Guddoomiyaha gobolka banaadir
G/M/Murashaxiinta wuxuu si kulul u canbaareyn ayaa hadalkii colaad hurinta ahaa ee ka soo yee ray G/G/Banaadir, ahna Duqa M/Muqdisho, Md.
Cumar Maxamuud Maxamed (Finish).
Goluhu wuxuu dhabu gaadanayaa in hanja baadda Guddoomiyaha Gobolka ay tahay farriin ka timid Madaxweyne Farmaajo toosna ugu so cota xubnaha Midowga Murashaxiinta.
Golaha waxaa u caddaatay in hoggaanka Do wladda u adeegsanayo tabihii Al Shabaab ee xalaaleysiga dhiigga shacabka Soomaaliyeed iy adoo diin loo adeegsanayo, si ula kac ahna uu hogaanka dawladuu hurinayo colaad una abuu rayo nacayb iyo xasarad bulshada dhexdeeda ah, gaar ahaan shacabka G/Banaadir. Golu hu wuxuu caddeynayaa in Madaxweyne Farm ajo uu qaadayo mas'uuliyadda natijada ka dhal ata falka colaad hurinta ah ee ay Xukuum adiisu ku hawlan tahay Goluhu wuxuu ugu ba aqayaa hoggaanka DFS inay ka waantoobaan colaad hurinta yo ficillada abuuraya naceybka, taa be delkeedana ka shaqeeyaan sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho wadar-ogol ah
Shariifka oo Baydhabo kula kulmay Madax weynaha K/galbeed
Madaxweynaha K/Galbeed, Md.Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa Shalayta Madaxtooyada Baydhabo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed oo Shalay gaaray maga aladaasi.
Madaxweynaha KGS ka hadlay socdaalka wafdiga Shariif Sheekh Axmed ku yimaadeen M/ Baydhabo ayaa ku sheegay mid booqasho ah. Isagoo Warbaahinta la hadlay ayaa tilmaam ay in Shariif Sheekh Axmed, ay si weyn u soo wada shaqeeyeen mudadii uu ku magacawnaa Madaxweynaha Qaranka, iminkana uu Baydha bo yimid, isagoo u ololeynayo doorashada mad axtinimada ee dalka.
Lafta-gareen ayaa sheegay in Shariifka uu ku soo dhaweynayo M/Baydhabo, oo caan ku ah buu yiri soo dhaweynta iyo martisoorka.
Shariif Sh.Axmed, Gudoomiyaha Madasha Xisb iyada Qaran ayaa Xarunta G/Baay ee M/Baydh abo u tagay dardargelinta ololihiisa ku aadan qabashada Xafiiska Madaxtooyada.
Md.Jabriil Ibraahim Cabdulle oo ka jawaab ay hadalkii Mahdi Guuleed, farriina u diray DF
Jabriil Ibraahim Cabdulle oo kamid ah mura shaxiinta ugu tunka weyn doorashada 2021 ay aa si weyn u dhaliilay dowladda federaalka Soo maaliya, xili uu Shalay dalka dib ugu soo laabt ay.
Musharax Jabriil ayaa waxa uu sheegay in wax-qabadka dowladda uusan dhaafin wadada Maka Al Mukarama, taasi oo uu xusay inay ka dhaxashay dowladihii ka horeeyay, isla mar kaana aysan ka sameyn wax isbedel ah dagaal ka dhanka ah argagixisada.
Waxa kale oo uu wax laga xumaado oo aan la jeclaysan ku tilmaamay hadalkii dhawaan uu Mahdi Guuleed ku sheegay in wareega 1aad ee doorashada lagu kala bixi doono, kaasi oo sare u qaaday tuhunka mucaaridka ah ee hanaanka doorashada soo socota.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in hadalada noo caas ah xiligan loo baahneyn, balse laga sugay ay madaxda sare ee dalka hadal wax ka badala xaalada kala guurka ah ee uu ku jiro dalku. Md.Jabriil ayaa sidoo kale waxa uu hanaan ka doorashada ka muujiyey wal-wal hor leh, isa goona carrabka ku adkeeyay in gebi ahaanba la ga fogaado isqab-qabsi iyo qalaalase laga cabsi qabo inay horseedo doorashada lagu murans an-yahay.
Musharaxan ayaa Shalay soo gaaray M/Mu qdisho, iyada oo soo dhaweyntiisa ay ka qeyb qaateen siyaasiyiin, dhalinyaro, bulsharada rayi dka ah iyo haweenka M/Muqdisho.
Soo dhaweynta oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimayay waxaa shacabka G/Ban aadir ay safnaayeen aafafka hore ee waddada garoonka diyaaradaha ee M/Muqdisho.
Murashax Jabril oo saxaafadda kula hadlay Hotel Royal Palace ayaa sheegay in uu maalm aha soo socdo si rasmi ah ugu dhawaaqi doono inuu yahay murashax u taagan xilka Madaxwey naha Soomaaliya. Isagoo ballan qaaday inuu awoodda dowladnimo ku soo celin doono shac abka, haddii uu ku guuleysto xilka Madaxweyne, uuna dalka gaarsiin doono inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Md.Jabril Cabdulle oo ka mid ah murashaxiin ta dhalinyarada ah ee isku soo taagaya xilka sa re ee Madaxweyne, ayaa aqoon durugsan u leh dib u heshiisiinta iyo dowlad wanaagga, wuxuu na la soo shaqeeyay dhammaan dowladahii ku meel gaarka ahaa tan iyo sanadkii 2004.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasi mada Online u sheegay in DFS ay Dorraad waar an soo qabasho ah u jartay Jeneral Abuukar Xa aji Warsame oo loo yaqaano Xuud, kaas dega anka Ceel-gaal ee G/Hiiraan ku haysta male eshiyo tobaneeyo ah.
Wararka aan helnay ayaa sheegay in boolis ka iyo melitariga gobalka Hiiraan lagu wareejiy ay warqada amarka soo qabashada ah.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ciidan ka la amray in ay xoog ku soo qaban karaan isa ga iyo ciidankiisa haddii ay diidaan inay isa soo dhiibaan, ayada oo aan loo haysan wixii dhib ah ee halkaas ka yimaada ee ka dhashay amar dii dada.
Jawi colaadeed oo xoog leh ayaa laga daree mayaa guud ahaan G/Hiiraan, gaar M/Beladwey ne oo ay ku dhowaadeen maleeshiyadaan oo mudooyinkaan isku hub aruursanayay dega anka Ceel-gaal. Jeneral Abuukar Xaaji Warsa me oo ka tirsanaa musharaxiintii xilka Madaxw eynaha HirShabeelle ayaa diidan doorashadii dhacday waxa uuna ku baaqay dagaal ka dhan ah HirShabeelle.
Tallaabooyinka uu qaaday Xuud ayaa horsed ay in 2 goor uu baaqdo safar uu M/Beledweyne ku tegi lahaa madaxweynaha HirShabeelle Cali Guudlaawe.
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa she egaya in mucaaradada Jeneral Xuud ay lacag iyo dhiiri-gelin ku bixinayaan qaar ka mid ah dad ka miisaanka ku dhex leh beesha uu kasoo je edo, oo diidan inay weysay kursigii madaxwey
ne ee HirShabeelle.
Axmed Daaci oo u digay Xasan iyo Shariif, farriinna u diray FARMAAJO
Guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir Md.Axmed Xasan Cadow (Axmed Daaci) ayaa fariin u diray madaxweyne Farmaajo, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, isagoo si gaar ah ugu digay Madaxweyne Farmaa jo. Md.Axmed Daaci ayaa sheegay in rag ga hadda siyaasadda isku haya kuwooda u gu cad cad ay bulsha du wada taqaano wax qabadkooda, mar dambena aan lagu hungoobi doonin.
"Madaxweyne dalka markii laguu dhiibay hal kii uu joogay hadda horay ayuu uga dhaqaaqay kuma dhaheyno, laakiin 2 qodob ayaan kuu hey naa, waana in aad mushaarkooda siiso shaqaa laha dowladda iyo ciidamada, balse wax ka dar anaa yimid oo Shabaab ayaad mushaar siisaa,” ayuu yiri Axmed Daaci.
Isaga oo sii hadlaayey ayuu yiri, "Madaxwey ne nama aadan xoreyn ee xoolihii aad naga qaa day ayaad noo qeybisay anaga iyo Al-Shabaab, marka nin laba mushaar bixiya ayaad tahay, Al-Shabaab kuma dhiira karin markii hore inay ca nshuuraan dekedda, garoonka iyo ganacsiga ka le ee dalka, marka wax dambe oo aad nagu sa sabato kuuma yaaliine xabad yaanaa kaa dha xlin.”
Dhanka kale Madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh ayuu ka dalbaday in mucaaradka ay hoggaamiyaan aysan eed ka im aan, "Mucaaradku haduu dhibaato keeno adin kaa la idiin heystaa,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa ugu baaqay labadaas masu ul in kursiga sidii looga sugaayey ay u sugaan oo dalka aysan u hor seedin dagaal, "Dooda ya an la joojin, laakiin dalkan waxaa ka xaaraam ah xabadu inay dhacdo, Shabaab ayaa horay noogu wadaye xabad kale yaan la bilaabin,” ayuu yiri guddoomiye Axmed Daaci.
Lafta-gareen oo shaaca ka qaaday cidda ‘caqabada ugu weyn’ ku ah maamulkiisa
Madaxweynaha maamulka K/Galbeed, Md.Ca bdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa markii u horeysay ka hadlay caqabadaha uu ka dhaqaaqi laayahay maamulkiisa, kaasi oo uu sheegay inay sabab u tahay in uu istaago hour marka maamulkaasi.
Madaxweynaha ayaa sheegay in caqabada u weyn ee maamulkiisa Koonfur Galbeed hay sata ay tahay koo xda Al-Shabaab, oo uu shee gay inay go’doon geliyeen deeg aano ka tirsan maamulkiisa.
Waxa kale oo uu sheegay in go’doominta Al-Shabaab ay keentay inaysan isku gudbin deg mooyinka qaar oo ka tirsan Koonfur Galbeed, is agoona xusay in afar degmo oo ka tirsan maa mulkiisa ay gacanta ku hayaan kooxdaasi. Laf ta-gareen ayaa carabka ku adkeeyay in K/Ga lbeed ay ka dhaqaaqi laadahay amni dara da ay horseedka u yihiin Shabaabku, hase yee she ay dagaal xoogan kala hortagi doonaan.
"Caqabado amni ayaa ka taagan K/Galbeed, wa xaana waajib ah in si wada-jir ah looga howl-ga lo in la isku furo waddoyinka deegaanada iyo de gmooyinka maamulka” ayuu yiri Madaxweyne Laft-gareen.
Hadalkan ayaa imanaya xili ay Shabaab sare u qaaday dhaq-dhaqaaqyada ay ka sameyso maamulka K/Galbeed, iyada oo mararka qaar ka geysata dilal qorseysan iyo falal amniga lidi ku ah.
Nin qarax waday oo lagu qa